Dagaal shalay iyo xaley ka socda deegaanka Beexaani
Shalay galabnimadii ayaa waxaa deegaanka Beexaani agagaarka Conis Stadium ka qarxay dagaal aad u culus oo u dhexeeya kooxaha Maleeshiyo ah, wuxuuna dagaalkaasi saba-bay inay ku dhintaan ilaa iyo 7-ruux ayna ku dhaawacmeen dad kale oo fara badan ayna u badnaayeen dad rayid ah oo rasaastu ugu tagtay goobihii ay ku sugnaayeen.
Dagaalkaan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa si weyn looga dareemay Muqdisho ilaa iyo haatanna lama garanayo cidda uu u dhexeeyo dagaalkan, balse waxaa la sheegay inuu u dhexeeyo ilaalada Hotel Global oo ay leedahay Miineey Xaashi Shibis iyo maleeshiyo daacad u ah Ganacsade Bashiir Raage.
Dagaalkaan waxa uu saamayn ku yeeshay isku socodka gaadiidka agagaarka jubba, beexaani iyo xaafadaha u dhowdhow, sidoo kale waxa uu baajiyay dagaalka kulan ciyaareed dhex marayay kooxaha Savana iyo Bariga dhexe oo ka dhisan degmada Afgooye, waxaana ka mid ah dadka dhaawacmay dadweyne u soo daawasho tagay ciyaartaasi iyadoo kulankaasi uu baaqday.
Warar ayaa waxay sheegayaan in hotel-ka Global ay soo gaareen khasaarooyin aad u badan kaddib markii ay ku dhaceen madaafiic. Odayaasha deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa la sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii loo qaboojin lahaa dagaalka, balse uma eka Malleeshiyooyinka dagaallamaya kuwo qaadanaya dhex dhexaadinta ay wadaan odayaasha, waxaana haatan socda isku hub urursi labada dhinac ah.
DENMARK: URUR MIDEEYAY DHALINYARADA SOMAALIYEED
Copenhagen: Urur ay maamulaan dhalinyaro soomaaliyeed ayaa xaflad heer sare ah kuqabtay Guji May 10
Saddex dhallin yaro Soomaaliyeed oo loo qaatay kooxda kubadda cagta ee Minnesota [Warbixintii Wardheere]
Cuna qabateenta Xoolaha Soomaaliaya ee loo iib geyn jiray Sacuudiga oo laga Qaaday
.Wareegto ka soo baxdey Xafiiska w/A/ Gudaha DGPL
.Dood: Xeerhoosaad ladoonayo in loo sameeyo Badaha
.Xarun Cafimaad oo laga Furay Bosaso
.Maalinta Bisha Cas oo lagu qabtay Boosaaso
Ka akhri wararka Boosaaso ee Maanta May 10